Itoobiya Kayga Anaa Leh..Kaagana kula Lihi!!!!!!!!!!. – Hornafrik Media Network
Wiilkaan asagoo saqiir ah oo tahriibaya ayaa laga qabtay xad beenaadka Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxeeya, sababta ugu weyn ama dambiga loo haystana wuxuuu ahaa VISSA ama ogolaasho dal ku gal ma haysatid.
Wuxuu ku qaangaaray Xabsiga ITOOBIYA.
Maaha wax kaligiis u gooniya oo maxaabiista 114 ta ah badankooda waxaa loo haystay arrimo nuucaas ah, laakin waxaan asaga u xushay inuu ilma yahay.
Waxaan aad uga xumaaday oo aan uga xanaaqay, Soomaaliya waa dalka kaliya ee aan hal qof oo AJAANIB ah xabsiyadooda ku jirin, haddana boqolaal kun ku dhawaad oo ajaanib ah ku joogaan ugana shaqeystaan sharci la’aan iyo si aan shuruucda caalamka iyo tan dalka aan waafaqsanayn.
Garoonka mooyee dadka dhulka ka soo galaya hal qof oo ogolaasho haysta malaha.
Qiyaastii Boqol ku dhawaad Itoobiyaan ah ayaa Soomaaliya sharci darro ku soo gala maalin walba, waxayna isugu jiraan tahriiba-yaal iyo kuwa dalka daga oo ka shaqaysta.
Inta badan gobollada Soomaaliya, Itoobiyaanku waa joogaan waana daganyihiin wax ogolaasho ama sharci ahna kuma joogaan, waxaa u dheer in aysanba u dhaqmayn sidii dad, dal islaameed sharci darro ku joooga.
Gobollada waqooyi iyo waqooyi bari(Somaliland&puntland) oo in muddo ah nabad iyo kala dambayn ka jirtay waa meelaha ugu badan ee ay joogaan, magaalooyinka qaarna xaafado iyo ganacsi ayey leeyihiin , halka ay shaqooyinkii hoose sida tima jarista, kabo baalashka iyo dhar dhaqista ay la wareegeen magaalooyin dalka ka mid ah, halkaasna ay shaqo la’aan ku noqdeen muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed oo ilmaha ka korsan jiray shaqooyinkaas.
Itoobiyaanku waxay kaloo joogaan Caasimadda dalka iyo gobollada bartamaha iyo koofurta, xataa in ay ka mid yihiin
kooxa nabadiidka ayaa la rumaysanyahay.
Qofka Itoobiyaanka ah markuu dhowr sano joogo af Soomaaliga ayuu bartaa, gobolka Soomaaliya ah ee uu markaas joogo mid ka fog in uu ka soo jeedo ayuu sheegtaa.
Waxaa dheer in marin tahriib ay u tahay Soomaaliya, marka ay dalalka Caranta u socdaan xeebaha dalkana dooni ay ka raacaan si aan shuruucda waafaqsanayn.
Guud ahaan maamulada dalka ka jira oo ay ka mid tahay Soomaaliland oo gooni isku taag ku dhawaaqday si buuxdana gacanta ugu haysa dhulkeeda awoodna u leh in ay la socoto dadka soo galaya gudaha xaqna u leh in ay ku sooo rogto dal ku gal ama VISSA, wax xil ah iskama saarto arrintaas, ayadoo weliba ka samayn karto dhaqaale ajaanibta dalka soo galaya, waana albaabka ugu weyn oo Itoobiyaanku Soomaaliya ka soo galaan.
Ma aha Itoobiyaanka kaliya ee Soomaaliya waxaa kaloo jooga KENYAN xirfadla yaal ah intooda badan garoonka ayey Vissa ka soo qaataan laakin markuu ka dhaco daganaansho ma raadsadaan, lacag aad u badan oo aan la canshuurina dalka waa ka shaqaystaan.
Waxaa jira in ayaan dhexe hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay dhowr nin oo Kenyaan ah ka qabteen ayagoo sharci darro dalka ku joogay lana tarxiilay, arrintaas bogaadin ayey mudantahay, laakin waxaa fiicnaa lahayd in la joogteeyo maadama weli ay jiraan Kenyan ama ajaanib kale oo dalka ku joogta sharci la’aan.
Waa dhab in duruuf dalkeena ka jirto iyo awoodda dowladdana ay koobantahay, laakiin soo lama gaarin xilligi maamulada iyo dowladda dhexe xil iska saari lahaayeen dadka iska soo galaya dalka oo iska baxaya ayadoon lala socon wax khidmad ahna aan laga qaadin?
Itoobiyaanka in la dhaho VISSA ka soo qaata Safaaradda Soomaaliya ugu taal ADIS-ABAB, maaha wax awood gooniya u baahan.
Dalka ma Itoobiya ayaa nala leh?
See caqli gal ku tahay in ay saqiiradeena ku xir-xiraan sharci kuma aadan soo galin dalka, ayaguna magaalooyin dhan ay la wareegaan xaafado u gooniyana ka samaystaan?
Soo taasi maaha kayga anaa leh kaadana kula lihi?
Abdifitah Mohamed Xaambe